VSI Sand Machine - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>igwe nkuku nkume>> VSI Sand Machine Machine
VSI Sand Machine Machine
edemede si: igwe nkuku nkume | oge: April 3, 2013 | Tag:igwe nkuku nkume	|
VSI Sand Machine, Shanghai XSM bụ ngwá ọrụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ, VSI Sand Machine Machine, ngwá ọrụ ndị bara uru, ndị na - emepụta ihe igwe na - emepụta ihe .Ore mining process, the first belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
VSI Sand Making Machine Okwu Mmalite
VSI Sand Making Machine Ngwa
1. Akwụsị ájá ájá na ụda mkpọtụ.
2. Akwa arụmọrụ na obere oriri.
3. Enwere ike ichipịa ọtụtụ ihe siri ike.
4. Ngwa ikpeazụ nke ọdịdị akpụkpọ na ọnụ ala.
5. Jiri ihe ndị na-eguzogide ọgwụ na-eji ihe owuwu pụrụ iche.
6. Mee ka ike gwuo ike ma gbasie ike.
7. Oke arụmọrụ, ịrụ ọrụ dị mma ma nwụnye.
8. Usoro ntinye mmanu di elu nke oma na-eme ka ogwe osisi di ala.
VSI Nkume Na-eme Ka Akpụcha Mmanụ
VSI Nkume a na-akpụ akpụ na-emepụta ihe mgbochi nke mbu nke anvils, na-etinye ihe mgbochi na-edozi mkpara, nkedo ihe mgbochi nke abụọ na anvils, rotor, plateer plate, blow bar, wedge lock assembly, discharge opening, third stage impact plate, back-up mmanya na ihe ndị ọzọ.
2. Okpokoro Isi Ebube
3. Central Rotator Nkebi
4. Mbugharị Mpụga Nkebi
5. Mpaghara Mkpụrụ Isi
6. Ejiri Aka na Aka
Ike (t / h) Na-eri nri ma na Center na Sides 120-180 200-260 300-380 450-520
Nri Na Center 60-90 100-130 150-190 225-260
Ogologo Nri Max (mm) Nwepu ihe <35 <40 <45 <50
Ihe siri ike <30 <35 <40 <45
Mgbanwe Rotation (r / min) 1700-1890 1520-1690 1360-1510 1180-1310
Ike (kw) 110-150 180-220 264-320 400-440
Ogbegbe Dimension l * w * h (mm) 3700 × 2150 × 2100 4140 × 2280 × 2425 4560 × 2447 × 2778 5000 × 2700 × 3300
Ebu ibu (t) 7.8 10.3 16 25.6
ike Tụkwasịnụ 380V, 50HZ 380V, 50HZ 380V, 50HZ 380V, 50HZ
Sensọ egwu Nchọpụta nchọpụta: 0.1-20mm / s na-agbanwe agbanwe
Ebe mmanu mmanu na mmanu mmiri ike 2 × 0.31kw
Aka nchekwa Nfuli mmanụ abụọ na-eme ka mmanye zuru ezu;
na-agbanyụkwa ọkụ na-enweghị mmiri mmanụ ma ọ bụ ike hydraulic;
belata okpomọkụ na mmiri dị jụụ n'oge okpomọkụ; bulie okpomọkụ na moto na oyi.
Okpokoro Omume (l) w (mm) 820 × 520 × 1270 820 × 520 × 1270
Ike nke igwe tank 2kw
Rịba ama: Nkọwapụta a bụ naanị ntụpọ, mgbanwe ọ bụla dị n'okpuru VSI Sand Making Machine Ngwaahịa.
1. Nri nri Center:
Ihe ndi ozo na-adaba na hopper, ma site na ime nri n'ime etiti ma banye
rotor na-agba ọsọ nke ga-atụfu ihe ndị ahụ ọsọ ọsọ (na 60-75m / s). Ngwa ngwa na-egbu ihe ndị ahụ na-ada ada. Mgbe ahụ, ihe ndị ahụ na-adaba ihe ndị ahụ dị na vortex ma ọ bụ ihe ntanetị ndị na-emetụta ya, a na-agbanyeghachikwa n'elu oghere. Nke a nwere ike ịmepụta ngosipụta e mechiri emechi site na usoro nhazi okirikiri. Mgbe ahụ, ngwaahịa ndị a na-agbachi agbawa dara. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe ndị na-ada ada na ihe ndị na-esi na ya apụta bụ ihe mkpuchi ihe na-aga n'ihu. N'ikpeazụ, a ga-ewepụ ihe ndị a kpochapụrụ n'ala site na ala olulu mmiri.
2. Nri Nri:
A ga-ekewa ihe ndị dị iche iche abụọ n'akụkụ abụọ site na efere efere mgbe ị na-adaba na hopper na ebe ọhụụ. Akụkụ nke ihe na - agafe efere na - ekesa efere ma tinye ọsọ ọsọ ọsọ ma mesịa megharịa ma chụpụ .Ụzọ nke ọzọ na - ada site n'akụkụ nke onye nkesa. Ngwa ihe mbụ na-eji ihe ndị na-adabaghị adaba. Ngwa ngwa na-egbu ihe ndị ahụ na-ada ada. Mgbe ahụ, ihe ndị ahụ na-adaba ihe ndị ahụ dị na vortex ma ọ bụ ihe ntanetị ndị na-emetụta ya, a na-agbanyeghachikwa n'elu oghere. Nke a nwere ike ịmepụta ngosipụta e mechiri emechi site na usoro nhazi okirikiri. Mgbe ahụ, ngwaahịa ndị a na-agbachi agbawa dara. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe ndị na-ada ada na ihe ndị na-esi na ya apụta bụ ihe mkpuchi ihe na-aga n'ihu. N'ikpeazụ, a ga-ewepụ ihe ndị anwụrụ n'ala site na ala olulu mmiri.
Mgbasa Mmetụta Mgbatị Egwu →